Ukuguguleka, Ukuqhuma kanye Nemiphumela Yokulinganiswa Kobuchwepheshe | Martech Zone
Ukuguguleka, Ukuqhuma kanye Nemiphumela Yokulinganiswa Kobuchwepheshe
ULwesithathu, May 27, 2015 ULwesithathu, May 27, 2015 Douglas Karr
Kukhona ukusebenzisana okwedlulele kulokho okwenzekayo ezimbonini eziningi - kufaka phakathi izindaba, ukudla, umculo, ezokuthutha, ubuchwepheshe kanye nayo yonke into emhlabeni - nendlela i-geography yethu eguquka ngayo ngokuhamba kwesikhathi. Isikhathi esisithathayo ukumane sifushane njengoba ubuchwepheshe buhamba phambili ngokushesha.
Izindaba zishintshe ngokushesha okukhulu ngenxa yejubane lewebhu kanye nokukwazi ukuxhumana ngokushesha. Akusadingeki ukuthi izithameli zilinde imininingwane ezosatshalaliswa, zingavele ziye ngqo emthonjeni ukuze zithole imininingwane eyiyo. Izintatheli zicindezelwe kwacishwa amaphephandaba njengoba ama-classifieds nezikhangiso zisukile emaphepheni ezindaba naku-inthanethi. Ngisakholelwa ukuthi kunenani elikhulu kubuntatheli - ukuba nomuntu abambe ajule futhi aphenye - ngokungafani nababhlogi be-blog ... kepha balwela ukuthola imodeli efanele. Ngikholwa ukuthi izofika. Izindaba eziphenyayo zisabalulekile… kufanele nje sikhiphe umkhakha wezindaba embonini ye-clickbait.
Ukudla, isibonelo, kugudluza ukugxila kusuka ekukhiqizweni okukhulu kuye ekukhiqizeni okuncane nokusatshalaliswa. Umngani wami, uChris Baggott, isibonelo utshala imali kakhulu kule mboni. Ubuchwepheshe kwezolimo nokulungiswa kwezinto benza ukuthi kube lula ukuthi amapulazi amancane ancintisane nezinkampani ezinkulu. Futhi ukusatshalaliswa okuncane kungenziwa ngokukhomba kwendawo. UChris, ngokwesibonelo, unendawo yokudlela okuyizindleko ezinkulu zokumaketha ezigcina zikhona ku-Facebook.
Abantu abaningi babheka imboni yomculo njengokufa, kepha empeleni kuyinqubo efanayo eyenzeka ngokudla. Emculweni, bekuneqembu elikhethiwe labakhiqizi abaningi abaphethe okhiye balokho esikuthengile, ukuthi sikuthenge kanjani, nokuthi kuphi. Manje, ngobuchwepheshe bedijithali, amaqembu amancane angaveza futhi asabalalise umculo ngaphandle kwesidingo selebula esayiniwe. Futhi izindawo eziningi ziyaqhamuka ezivumela amabhendi ukwakha isidingo ngezithameli, bese ehambela ukwenza imibukiso ebukhoma lapho. Okuhlanganisa lokho ngokuthengiswa okuthengisiwe online futhi umculi angaziphilisa kahle. Abafana abashayela amaBentleys abayona abalandeli balokhu, noma kunjalo.
Ezokuhamba nazo ziyashintsha. Izinhlelo zokusebenza zeselula zenze ukuthi u-Uber noLyft bakwazi ukuguqula ezokuhamba, okuvumela noma ngubani ukuthi athole imoto ehlanzekile emgwaqeni eyolanda abantu abashiye.
Ngokubona kwami, kunezici zalokhu okumele sizigcine engqondweni ngokukhangisa. Imvamisa, kukhona ifayela le- intaba-mlilo yomsebenzi nokwenziwa okusha okukhuthaza i-geography esanda kutholwa ebingakaze ibe khona ngaphambili. Ama-Smartphones, ngokwesibonelo. Kwaqhuma inzuzo enkulu futhi labo abazimisele ukuzibeka engozini benza imali eningi. Abamakethi abazivumelanisa nezikhathi zakuqala bahamba ijika eliphakeme futhi babona imiphumela emangalisayo. Abakhangisi kufanele bahlale beqaphe intaba-mlilo elandelayo… ukuba ngumtholi osenesikhathi kungavuna imivuzo emihle.
Vele, ngemuva kokuthi okuthile kuqhume emsebenzini, ukuma kwezwe kuyashintsha. Umncintiswano uhlala ngaphakathi futhi kwabiwa isabelo semakethe. Le yi ukuguguleka. Inzuzo yetekisi yamatekisi, ngokwesibonelo, isizinzile emalini engenayo yomshayeli we-Uber. Akunasidingo sezakhiwo ezinkulu zehhovisi, izinhlelo zokungena, ama-cabs aphuzi, amasistimu omsakazo, abaphathi bama-shift, njll. Ziyakhukhuleka futhi umphumela uba ukuthuthwa okuhle ngenani eliqinile elihlinzeka ngokuhola okufanele ukushayela kwabaningi.
Ngemuva kwalokho, kwezobuchwepheshe, sibheka i- uhambahamba. Umfula wezokuxhumana nabantu - ngokwesibonelo - ubugcwele ama-rapids amahle. Izinkampani ezinkulu zakhiwa ukuqapha nokushicilela ngaphesheya komfula weTwitter noFacebook. Kepha umfula usuqala ukuzinza impela manje. Amanye amahlumela ahlanya enzeka njenge-Google + futhi izinkulungwane zezicelo zifike emakethe. Eminyakeni eyishumi kamuva, nokho, umfula uya ngokujula futhi izindlela, izindlela ezihamba phambili, namapulatifomu aseqala ukuhlala.
Kuthatha izinkulungwane zeminyaka ukwakheka kwejografi, kepha kuthatha kuphela amahora ukwakha ubuchwepheshe. Abathengisi abaningi bathola induduzo ngomhlaba ongashintshi abangakhela kuwo nokungafanele bakhathazeke ngawo. Ngokweqiniso impela, angikholwa ukuthi kulapho sihlala khona futhi mhlawumbe ngeke siphinde. Umhlaba uyashintsha ngaphansi kwethu futhi abathengisi kufanele basheshe ukusizakala ngama-ebbs nokugeleza. Ngena kusenesikhathi futhi ungagezwa ngamanzi, kepha ngena sekwephuze kakhulu bese usala wakha phezu kwesomiso.
Izintaba zizohlala zidilika. Kungakho sibona abafana abakhulu kuzo zonke lezi zimboni bethenga izinkampani ezincane eziqhumayo futhi bezama ukuqinisa amadamu nokuvuza okucekela phansi impahla yabo ephambili. Bangakwenza lokho ngokunxenxa imithetho emisha noma ngokushayela amacala abameli abanamandla amakhulu ukugcina amanzi evaliwe. Bangakwazi ukumelana nayo isikhashana - kepha ekugcineni imvelo izonqoba.
Izikhiye ezi-6 Zokukhuthaza Umcimbi Kwezokuxhumana
Kusetshenziswe Amagama Ahlukene ayi-14 Kwezingxenyekazi Zokumaketha Ezizenzakalelayo